Ndezvipi zvigadzirwa zvine indexed? | Ehupfumi Zvemari
Ndezvipi zvine indexed zvigadzirwa?
Kana uchitaura nezve chikamu chekudyara, chimwe chezvigadzirwa zvinozivikanwa zviriko izvo zvinonzi zvigadzirwa zvine indexed. Ivo ndeimwe yesarudzo dzakanakisa kune varimi vane neruzivo rushoma kana kudzidza mumisika yemari. Iwo anokwanisa kuiswa kune ese ari maviri akagadziriswa mari zvigadzirwa, senge temu bhangi dhipoziti uye kusiana mari yemadhipoziti, uko mari yekudyara iri imwe yeakanyanya kuratidzira. Muzviitiko zvese izvi, vanodzokorora shanduko yemari yemari iyo yega yezvigadzirwa zvemari zvakabatanidzwa.
Yayo shanduko iri zvine musoro zvakasiyana kune izvo zvinogadzirwa kubva kune zvakajairika zvigadzirwa zvekudyara. Mupfungwa yekuti zvinonyatso kuratidza kushanduka kwemisika yemari. Kusvika padanho rekuti ivo vanove imwe nzira chaiyo yekutanga kuisa mari, asi pasina kufunga nezvenjodzi dzisina basa mukushanda. Ivo vanonyanya kuratidzirwa kuita mari inobatsira mukureba kwenguva uye pamusoro penguva pfupi. Naizvozvo, ivo vanogamuchira ndevanozvidzivirira kana vanochengetedza investor chimiro
Imwe yemabhenefiti ezvinonzi zvigadzirwa zvine indexed ndeyekuti yakawanda uye yakawanda yekudyara mamodheru ari kuvhurwa. Ivo havachaganhurirwa kune mari yekudyara, sezvavakange vari kusvika makore mashoma apfuura, asi iwe unogona kutovanyorera kubva ku yakatarwa-temu bhangi dhipoziti. Nekuti zvazviri pakupera kwezuva ndezvekuteedzera pfuma yemari, chero zvingave zviri. Icho chiri icho chaicho chirevo chezvakanyorwa zvigadzirwa uye izvo iwe zvaunogona kubatsirwa nazvo kutanga yako investments kubva ikozvino zvichienda mberi.
1 Indexed Zvigadzirwa: Mari
2 Vanokundikana kurova indices
3 Makomisheni ezasi
4 ETF vs index index mari
5 Zvakanakira kunongedza
6 Kukanganisa kwechigadzirwa ichi
Indexed Zvigadzirwa: Mari
Ivo vari mu Investment funds uko huzivi hwechokwadi hwezvigadzirwa zvine indexed zvakanyatsogadziriswa. Nekuti mukuita, ivo vanogona kuchinjiswa kune chero mhando chikamu cheiyo chikamu kana index mune epasi rose equities. Kwete pasina, iwe une mupiro wekuti pane indekisi mari pane chero index yakadai Ibex 35 kana iyo S & P500, kududza mienzaniso mishoma. Iine iine nyore-kunzwisisa-makanika inoenderana nekuti iyo indekisi inokwira, homwe inowedzera mukukosha zvakaenzana. Kwete nenzira yekufungidzira sezvazvinoitika nemamwe marudzi emari yekudyara asina kunyoreswa.
Imwe yemabhenefiti ayo ndeyekuti mashandiro ako anogona kuendeswa, zvese kumisika yenyika pamwe neepasi rese, kunyangwe vari ivo vekutanga vanonyanya kugadzira chigadzirwa chemari ichi. Kupfuura chero chinhu chekuhaya mumakambani manejimendi ari munharaunda medu yenyika uye vanosarudza kusarudza ino nzvimbo. Asi zvirokwazvo hapana mhando yezvirambidzo kana zvikwaniso kuti ugone kusarudza yakamisikidzwa yekudyara chigadzirwa kana homwe. Izvo chete zvakagadzirwa nemaneja pachawo.
Vanokundikana kurova indices
Ehezve, kana izvo zvauri kutsvaga chiri chigadzirwa chekurova ma indexes, iyi haisi iyo imwe nzira yaunoda panguva ino chaiyo. Nekuti haamboitise mashandiro kubatsira nenzira iyi, kana iye haadaro maitiro ayo akaderera kune iyo yakatarwa nemisika yemari. Mune imwe nzira, ndiyo nzira yawakaisa mari yako mukutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya. Asi pachinzvimbo chekuchengetedzeka kumwe chete, mune chikamu kana indekisi kuti ubudirire kusiyanisa mari yakaiswa. Sezvauchaona, pane mimwe misiyano inoita zvigadzirwa zvine indexed zvakasiyana mubato rekudyara.
Kubudikidza nemuenzaniso wekudyara uyu zviri nyore kwazvo kuti iwe ugadzirise kuchokwadi chiri kutara misika yezvemari zuva nezuva. Pamusoro pehumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Izvi, musimboti, hazvikubatsire kana kukuvadza zvakanyanya. Kana zvisiri, pane kudaro, inoenderana neyekudyara maitiro iyo yakatosiyana zvakanyanya kubva kune yakasara uye kuti haina kuvapo kusvika makore mashoma apfuura. Zvakanaka, iwe unogona ikozvino kuvashandira pasina dambudziko padivi rako.
Imwe yeakanyanya kufanira hunhu hweayo anonzi zvigadzirwa zvine indexed ndeyekuti vanopa makomisheni uye mari mukutarisira kwavo izvo zviri inodhura kune vese vashandisi. Ndokunge, zvinokutorera mari shoma kuita investa kubva kune izvi zvakasarudzika zvigadzirwa zvaunazvo pamberi pako. Uye zvechokwadi pasina kubhadhara zvakanyanya makomisheni mune mari yeanoshanda manejimendi kana yehumwe hunhu. Iko kwainogona kazhinji kusvika 2% pamari yakadyarwa. Mune indekisi mutual mari iyi miripo haiwanzosvika 0,80%. Naiyo iwe yaunogona kuchengetedza yakawanda mari neako kuhaya.
Nezve mari yekudyara yeiyo yakanyorwa indexed, iwe unofanirwa kuziva kuti iwo ndiwo akadhura pane aunogona kuwana mumusika. Kusvika padanho rekuti zvive nyore kwauri ita kuti ibatsire pamberi penguva uye kana makomisheni uye mari yezvinhu izvi zvemari zvadzikiswa. Chero iwo musika wezvemari wauri kunanga panguva ino. Kunyangwe zvine musoro kuti misika yenyika ishoma pane inoenderana neyakabhadharwa. Zvimwe zvakagadziriswa kune izvo chaizvo zvinodiwa nevashandisi.
ETF vs index index mari
ETFs, iri kunyorwa mumisika yakarongeka, ipa muzvinashawo mukana wekusarudza mutengo wekutenga nekutengesa, vanokutendera tenga kana kutengesa chero nguva yezuva. Nema oparesheni akafanana chaizvo neaya anopiwa kuburikidza neindekisi mari, asi nemusiyano mukuru wekuti mune yekupedzisira unogona kuchengetedza mari yakawanda mumakomisheni. Kubva panguva ino yekutarisa zvinonyanya kubatsira kubhadhara index index kupfuura yakanyorwa. Kunyangwe zvese zvichizotenderera pane zvinotarisirwa nemumwe wevatengesi.
Izvo hazvigone kukanganikwa, pane zvinopesana, iyo index mari inogona kutengwa kana kutengeswa kamwe chete pazuva tichiregeredza a priori mutengo kutengesa. Kubva pane ino maonero ekudyara, iwo ndiwo akakodzera mari yekutsinhana-yakatengeswa mari kana ma ETF emabasa ako mumisika yemari. Mune mamwe mazwi, pachave nematanho mazhinji ekugutsikana mune yega yega yezvigadzirwa zvemari uye kuti ivo vanokwanisa kusarudza yako sarudzo kubva zvino zvichienda mberi. Nezvakanaka nezvayakaipira, sekune rimwe divi zvine musoro kufunga kana uchitaura nezve zvigadzirwa zvakagadzirirwa kudyara ndizvo zvatiri kutaura nezvazvo panguva ino.
Iyi kirasi yezvigadzirwa zvemari inotakura akateedzana mabhenefiti aunofanirwa kuziva kubva panguva yekutanga. Zvekuti nenzira iyi, unogona kushanda zvirinyore navo uye unogona kunyange kuwana zvakanyanya kubva pane ako mashandiro. Chero zvazvingaitika, vanokuunzira mabhenefiti anotevera atinokufumura pazasi.
Mwanakomana zvakachipa kupfuura zvimwe zvigadzirwa zvemari uye hazvidi kuti utarisane nemakomisheni akakwira, sezvazvinoitika nemamwe mamodheru ekudyara.
Kuongorora kwaro kuri nyore zvikuru kubvira chaizvo equices indices, pasina kana mutsauko sezvazvinowanzoitika kune yakawanda yechinyakare mari yekudyara. Kusvika padanho rekuti ivo vachazoda kushoma nhamburiko yekuona kwavo kushanduka
Mwanakomana zvigadzirwa zvakapusa izvo hazvidi kudzidza kwakakosha. Ivo anochinjirwa kune ese ma profiles evadiki nepakati varimi. Pasina kumbove nechero mhando yematambudziko ekuzvinzwisisa nenzira kwayo.
Ivo vane hunyanzvi mune pfungwa yekuti vakagadzirwa kwenguva pfupi. Kune rimwe divi, ivo vanotanga kubva kune manejimendi iri most innovative uye izvo zvinomutsa maonero matsva ekudyara. Iwo mamaneja aripo kune vekutengesa vatengi varipo kupihwa kweiyo index mari iyo inodyara muSpanish, European uye epasi rose misika yemasheya.
Kukanganisa kwechigadzirwa ichi
Iwo akanyorwa, kune rimwe divi, haakutenderi iwe kutsauka kubva mukushanduka kweiyo equices indices. Zvakajairika kuti imwe mari yekudyara inogona kurova indekisi yavari kutevera kana zvimwewo. Mupfungwa iyi, izvo zvigadzirwa zvemari zvakanyanya zvisingatarisirwi kubva pane ese maonero. Ivo vanogona kukupa iwe unoshamisa kushamisika, zvese mune imwe nzira uye imwe. Chinhu chisingaitike nezvakanyorwa zvigadzirwa kana mari. Kubva pane ino mamiriro, zvinonyanya kuomarara kuwana kukwirisa kukuru uye neimwe nzira kunyangwe zvisingatarisirwe.
Kuburikidza nemakore zvakaratidzwa izvozvo mukureba kune vashoma vashoma mari kana anoshingairira manejimendi mari inogona kurova maindices, ndiko kuti, mukufamba kwenguva zvakanyanyisa kuomesa purofiti inopihwa nemaindices. Izvo zvinokupa maratidziro zviri pamusoro pezvese chengetedzo yekuita mari kubva iwe uchiziva nguva dzese zvaunoratidzwa. Pasina chero mhando yekutsauka mune yemari midziyo yakasarudzwa nevashambadzi.
Hazvishamise kuti uku ndiko kubheja kukuru kwakaitwa nemhando iyi kuita kuti kuchengetedza kubatsire uye pamusoro pezvimwe zvekufunga. Kunyangwe pakupera kwezuva iwe unofanirwa kuve iwe unofanirwa kutarisana nesarudzo yekuti zviri nyore here kwauri kuti uwane chimwe chezvinhu izvi zvemari. Zvekuti yako yekutarisa account balance inovandudzika gore negore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ndezvipi zvine indexed zvigadzirwa?
IAmerican stock market iri kutarisira downtrend?